Ciidammada dowladda Somalia Oo dib ula wareegay magaalada Balcad | Hangool News
Ciidammada dowladda Somalia Oo dib ula wareegay magaalada Balcad
Hangoolnews:- Waxaa magaalada Balcad dib ula wareegay ciidammada dowladda Soomaaliya kaddib muddo kooban oo ay ciidammada Al-Shabaab magaaladaasi haysteen.
Wararka ka imanaya magaaladaasi ku taal duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidammada dowladda ay dib ugu laabteen xarumahoodii, xaaladda magaaladuna haatan way deggan tahay.
Wararku waxa ay intaas ku darayaan in laba askari ay weerrarkaas ku dhinteen, laba kalana ay ku dhaawacmeen, halka haweeney rayid ah ay xabbad wiifto ah gurigeeda ugu tagtay.
Ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa arooryadii hore ee saaka dhowr jiho waxa ay ka weerareen magaalada Balcad oo qiyaastii 30km waqooyiga uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Ciidankaas ayaa la sheegayaa inay markiiba la wareegeen xarumihii dowladda hoose ee magaalada, sida xarunta dhexe ee maamulka iyo saldhiggii booliskaba, hasayeeshee markii dambe dib ayey uga gurteen.
Ciidammada dowladda ee halkaas ku sugnaa ayaa markii hore iska caabiyay ciidammada weerrarka ahaa balse dib ayey ugu gurteen daanta ay magaalada ka deggan yihiin ciidammada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM, halkaas oo ay markale ka soo rogaal celiyeen.
Qaar ka mid ah dadka magaaladaasi ayaa goor hore sheegay in bartamaha magaalada ay ku arkayeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab.
Yaa dilay maxayse galabsadeen hawlwadeennadii caafimaad ee lagu laayay Balcad?
‘Horay aabbihiis ayey hoggaamiye kooxeedyada u dileen, isagiina waa la dilay’
Xaaladda Balcad oo deggan kaddib weerarkii xalay
Ciidammada Al-Shabaab ayaa intii ay magaalada haysteen waxa a xabsiga ka sii daayeen dad badan oo maxaabiis ah.
Magaalada Balcad waa magaalo istaraatiiji ah, waxa ayna ka tirsan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe. Waqooyiga ayey 30km uga beegan tahay magaalada caaasimadda ah ee Muqdisho.
Markasta oo ay Shabaab yimaadaan ama qabsadaan magaaladaasi ayaa waxa ay uga dhigan tahay in ay awooddoodii ay weli nooshahay, oo dad badan ayaa sheegaya in weerrarkan uu ismuujin yahay.
Arrintaas oo cadaadis ku ah dowladda iyo ciidammada Midowga Afrika ee taageera mar haddii ay Shabaab bartamihii magaalada ay maanta joogaan.
Sanadkii hore ayay aheyd markii ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ay weerrar ku ekeeyeen magaalada, markaas oo ay qabsadeen inta badan magaalada, arrintaas oo la sheegayo in aanay waxba ka baran ciidammada dowladda ee magaaladaasi.